2- BOOSAASO: 01 Feb 2016, Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Puntland ayaa duhurnimo weerar ku qaaday guri uu daganaa Gudoomiyihii hore ee gobalka Barri Cabdisamad Galan-ka hadda ah wasiirka Amniga ee Puntland, oo lagu eedeynayay in uu abaabulayay kulamo ka dhan ah Xukuumadda, Howlgalkas waxa ka dhashay dhimasho & Dhaawac, waxaana hogaamiyey Taliyihii ciidamada Ilaalada Madaxtooyada ee xiligas (Mudo xileedkii Cabdiweli Gaas).
3- GAALKACYO: 09, Aug, 2020- Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Puntland ayaa aroornimadii hore ee saaka qaaday howlgal lagula dagaalamayay kooxo haystay Xerada Kabida, waxaana howlgalkas ku dhintay Taliyihii ciidanka Madaxtooyada. (Mudo Xileedk Siciid Deni)
W/Qoray: Farah Cabdulkadir Mohamed.
Wax lala yaabo maaha, wadamo badan baa sidaas, sameeya, sababtu waxa weeye, ciidan la yaqaano maaha oo laga aargoosan karo, lkn police caadiga ah loma diro hawalaha noocan oo klae, si aanay dhib aargoosi uga soo gaadhin iya ga iyo qaraabadooda. Dalalka Holland iyo Belguim waxa hawlgalad waaweyn fuliya ciidan ilaada boqortooyada. Ee loo yaqaan koning marashashays
Sh mouse jawaabtaadu waa sax lakiin dadku ma fahansana inkastoo saxafiyiinta qaarkood aysan fahan saneyn sida macalinka farah galeyn oo malaha an ogeynba aqoonay ba’a
Ilaahay ha naxariisto dhamaan inttii ku dhimatay hawl galkii ka dhacay galkacyo. Intaa ka Dib hawlgalkaa boliis baa lugu ogaa waa shaqadii boliiska garan maayo waxaa keenay cidan madaxtooyo.
Awbarakaale waa arin kaa da wayn sababta aadan u garanayn waayo ma fahmi kartid xalada jidha. Niman burcad ah oo drag dealers ah oo hubaysan meeshana ku xididaystay ayaa dagaal lagu qadayay ee maahayn xaawslay caano gadaysa waxa meesha joogay. Khsab ayayna ahayd in ciidan xoog leh loo adeegsado waana loo adeegsandoonaa ilaa bakhtigooda la keeno. Beegsiga burcada cabtooyda ah is waa lasoo afjarin dhowaan InshAllah.
Waa sida Sh Muse sheegay. Ma aha wax la xiriira cabburin iyo keligitalisnimo. Boliiska maxalliga badanaa waxay ku milmeen wax badan oo ka jira degaanka ay joogaan, Soomaalidana waxaa u dheer is-eegashada iyo aanada qabiilka. Tan kale, Gaalkacyo oo muddo dheer dhib ka jirtay, haddana, boliisku waa joogeen, wax la taaban karana kama aysan qaban.
Adduunka, matalan Mexico, kooxa daroogada gada waxaa lagula dagaallamaa militariga sababtoo ah aad bay u hubaysan yihiin, boliiskana ama way laaluushaan ama naftooda iyo qoysaskooda ayey uga baqaan.
Jaalkeen Al-Xaaji Atoore ayaa reer Galkacayood ahaa oo waxa aaggaas ka dhacaya naga shaafin lahaa laakiin indhawaale warkiisa ma hayno. Soo noqod xiisa leh.
Reer Puntland waxaa si xun u gabay aqoonyahannadooda iyo kuwooda taariikhyahanka ah oo dowrkoodii jaahil bixinta bulshadooda kaga aaddanaa ka soo bixi waayay. Dad kasta oo xadaarad soo lahaan jiray indheergaradkooda ayaa ilbixintooda horseed uga noqda oo idaacadaha iyo wargeysyada si joogto ah wacyigalin, bararaajin, iyo latalin taddawur ah la hor taagan.
Waa masiibo aad looga murugoodo in ay casrigan aynu joogno reer Puntland hoos isugu celiyaan dhaqanka ilbaxnimada iyo xadaaradda ka baxsan ee aanay mudnayn, sida waxa hadda Gaalkacayo ka dhacaya. In arrimaha sida sugidda amniga guud iyo badbaadada bulshada aanooyin reereed cabsi laga qabo aawadooda loogu fashilmo runtii waa naxdin lala ashaqaraaro.
PLTV, idaacadaha radyowga iyo mareegyada Puntland ayuu waajibku ahaa in ay dowladdu la kaashato ololaha baahinta wacyigalinta iyo baraarujinta bulshada
oo ayna indheergaradka maxalliga ah mudnaantooda ku guddoonsiiyaan si dareenka waddaniyaddu uu qummaati ugu baaho oo wax walba kala muqaddassanaado, ragaadka qabyaaladdana uga xorowdo.
Waan idin ka raalli galinayaa qaladaadka higgaadda erayada qaarkood igaga dhacay.